एकीकृत समाजवादीको चितवन जिल्ला अध्यक्षमा डा. पन्त चयन « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
एकीकृत समाजवादीको चितवन जिल्ला अध्यक्षमा डा. पन्त चयन
प्रकाशित मिति : २०७८, २६ भाद्र शनिबार ०८:५८
चितवन । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को अध्यक्षमा डा कृष्णराज पन्त चयन भएका छन् । शुक्रबार आयोजना गरिएको संयुक्त बैठक एवं कमिटी रुपान्तरण कार्यक्रममा पन्तको अध्यक्षतामा २२५ सदस्यीय जिल्ला कार्यसमिति गठन गरिएको हो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले निर्वाचन चुनाव चिह्नले जित्ने नभई जनताको मनले जित्न सकिने बताए ।